BETBOO868 'FATİH TERİM'E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!' - RESTBET501.COM GİRİŞ
“Fatih ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းဟာအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်တဲ့ Galatasaray ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ပါ။ ကျွန်တော်သမ္မတဖြစ်လာတဲ့အခါ Galatasaray Sportif AS မှာသူ့ကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးချင်ပါတယ်။ နည်းပြအဖြစ်လည်းပါ ၀ င်ပါတယ်။ ဆရာရဲ့ဘဏ္situationာရေးအခြေအနေကိုရှင်းပြဖို့လိုပါတယ်၊ သမ္မတမဟုတ်ဘဲအားကြီးသောသမ္မတသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဂလာတိဆာရာအတွင်းမှလာသူသမ္မတသည်ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီးအကောင်းဆုံးအဖွဲ့ရှိသည်။
Mustafa Cengiz ၏အုပ်ချုပ်ရေးကိုဝေဖန်သူ Ozan Korkut၊ “Mustafa Cengiz အုပ်ချုပ်ရေးကိုငါအောင်မြင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါစီမံခန့်ခွဲမှုကိုမထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ အထွေထွေညီလာခံမှာဆောင်းပါး ၃ ခုကျော်ကပြောခဲ့တယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီဖော်ပြခဲ့တဲ့စီမံကိန်းဘယ်နှစ်ယောက်ခဲ့ကြသည်။ 30 စီမံကိန်းများ၏သာအနည်းငယ်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဝင်ငွေထုတ်လုပ်ပြီးမဟုတ်ပါကလွှဲပြောင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ကိုရေးဆွဲအနာဂတ်အစီအစဉ်ကဘာလဲ? ဤပစ္စည်းမလုံလောက်သောကြောင့်ငါကဖြန့်ချိမပြုခဲ့။ ငါကမည်သူမဆိုဝတ်ဆင်ဖို့မဟုတျပါဘူး, ဒါပေမယ့်အမှားတွေကိုပြင်ပေးဖို့ “ အသုံးပြုအသုံးအနှုန်းတွေ။
RESTBET501 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ BETBOO618 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ SUPERBAHİS489 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ BETPAS423 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ BETBABA138 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ BETPAS423 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ RESTBET501 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ RESTBET501 GALATASARAY’DA FATİH TERİM’E TRANSFER GARANTİSİ SUPERTOTOBET0120 GALATASARAY’DA FATİH TERİM’E TRANSFER GARANTİSİ BETBOO868 TRABZONSPOR’A ABDULLAH AVCI REÇETESİ
6 Comments on BETBOO868 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’
SAMET December 8, 2020 at 9:40 pm
BURCU December 10, 2020 at 2:00 am
KÖKSAL December 10, 2020 at 3:50 pm
DENİZ December 10, 2020 at 11:20 pm
SİBEL December 13, 2020 at 11:30 am
TEVFİK December 14, 2020 at 11:00 am